Spundge: Fanamafisana ny atiny fiaraha-miasa ho an'ny ekipa | Martech Zone
Spundge manamora ny fanarahana ny vaovao tsara indrindra, ny famolavolana fahalalana, ny famolavolana hevitra maharesy lahatra ary ny famoronana atiny manan-kery. Samy manana kinova maimaimpoana sy kinova matihanina amin'ny sehatr'izy ireo izy ireo. Spundge PRO dia votoatin'ny votoaty ahafahan'ny ekipa sy ny olon-tsotra mahita, manamboatra, mamorona ary mizara atiny mahaliana sy manan-kery.
Spundge mamela anao:
lalana - Araho ny atiny tsara indrindra, voalamina tsara ao anaty kahie amin'ny lohahevitra, hetsika, olona na firafitra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ny fanitarana Spundge browser dia hanome soso-kevitra ireo Notebook tsara indrindra ho an'ireo andinin-tsoratra hitanao amin'ny Internet.
Filter - Ny loharanom-baovao rehetra dia tafangona ao anatin'ny Spundge Notebooks ho toy ny streaming tena misy atiny misy atiny misy atiny. Andramo indray mandeha ity dia ho tsapanao fa ora mamonjy fotoana firy.
miara-miasa - Spundge Notebook dia ara-tsosialy sy fiaraha-miasa, mamela anao hianatra miaraka sy amin'ny mpandray anjara manana tombotsoa iraisana. Ireo mpanaraka sy mpandray anjara dia mahazo ny fandefasana atiny voafantina voarafitra ao anatin'ny vondrona, mitazona ny rehetra hifandrindra.
Tsarovy ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana vahaolana farany naorin'ireo mpamorona, mpanonta ary mpivarotra ao an-tsaina miaraka amin'ireto fiasa manaraka ireto sy tombontsoa azo avy amin'ny fanontana matihanina:
Fiaraha-miasa bebe kokoa - Ireo mpampiasa Spundge PRO dia afaka miara-miasa mba hiara-hiasa amin'ny Tantara sy kahie. Izany dia ahafahanao mivarotra drafitra mora foana, mampiditra fanehoan-kevitra sy fanovana, mahita fanovana ary manara-maso ny fandrosoana.
Loharano atiny matihanina - Ireo mpampiasa Spundge PRO dia mahazo tombony amin'ny lisitry ny atiny firehoses Firehoses namboarina indrindra ho an'ireo matihanina. Tadiavo ny sary mety amin'ny lahatsoratranao na ny lahatsoratra tonga lafatra hamoahana indray, amin'ny tsindry vitsivitsy fotsiny, ary ao anatin'ny workflow feno iray ny rehetra.
Privacy - Tehirizo amin'ny toerana tokana sy azo antoka ary mety ny fikarohana sy votoatinao rehetra. Ny Spundge PRO Notebooks sy ny tantaranao dia afaka natao manokana hahazoana fidirana soa aman-tsara amin'ireo mpiara-miasa, na ho an'ny masonao irery.
Content Creation - Spundge PRO dia manome anao tonian-dahatsoratry ny atiny izay ahafahanao mitarika haingana sy mandatsaka ireo bitsika voatahiry, sary, rakipeo feo, fampisehoana interactive ary horonan-tsary eo amin'ny tantaranao. Manome fidirana eo noho eo sy mora ho an'ny rohy voatahiry sy ny fikarohana ao amin'ny kahie mandritra ny fotoana soratanao.
Smart Attribution - Spundge dia manampy ho azy ny automatisation rehefa mandika ianao na mametaka na misintona ary mandatsaka entana avy ao amin'ny kahie. Izy io koa dia mialoha ny enta-mavesatra URL rehefa mifandray amin'ny atiny ivelany ianao. Mahasoa, etika ary mpiorina tsara ny Spundge.
Syndication fipoahana - Manorata amin'ny Spundge, mamoaka na aiza na aiza. Ny tantara voasoratra ao amin'ny Spundge dia azo atao syndicated avy hatrany hamoahana amin'ny CMS toy ny WordPress, na toy ny mailaka mailaka amin'ny alàlan'ny MailChimp. Azonao atao ihany koa ny mandrafitra sy mandahatra ireo bitsika sy fanavaozana Facebook miaraka amin'izay. Manorata indray mandeha, avy eo atiny syndicate izay tokony halehany.
Embedding sy Analytics - Ny tantara Spundge dia azo apetraka amin'ny tranokala rehetra. Manolotra safidy iray hafa hizarana sy hamoahana atiny mora izany. Ny fanohanana voaorina amin'ny Google Analytics dia ahafahanao manara-maso ny atiny.
Push Fanavaozana - Ireo mpampiasa Pro dia mahazo tombony amin'ny fanavaozana haingana kokoa ny kahie sy tantara tafiditra. Ny fanovana dia atosika amin'ny fotoana tena izy na aiza na aiza no ampidirina ao anaty ny atiny.
Loharanom-pahalalana - Manaova famahanana atiny manokana na API te hampandeha anao ao amin'ny Notebooks ianao? Ireo mpampiasa Spundge PRO dia afaka manampy loharanom-pahalalana mahazatra. Izy io dia manome fitaovana ny ekipanao amin'ny fomba mahomby kokoa amin'ny familiana tariby, hijerena ireo arisiva anatiny ary hidirana amin'ireo angona sary. Hanampy anao koa izahay hiarina amin'ny fotoana fohy.
PS: Fa inona ireo turtlenecks goavambe ao amin'ny horonantsary?
Tags: Attributionanalytics momba ny atinyfiaraha-miasa amin'ny atinycurationfampidirana atinysivanaloharanom-baovaosyndication atinyfanarahana ny atinymanosika fanavaozanaspundgespundge pro
Ny fiantraikan'ny haino aman-jery sosialy amin'ny varotra